घुस्कीमा हरिनगर गाउँपालिकाद्वारा ट्रान्सफर्मर जडान, स्थानीयलाई टुकीबाट राहत - inaruwaonline.com
घुस्कीमा हरिनगर गाउँपालिकाद्वारा ट्रान्सफर्मर जडान, स्थानीयलाई टुकीबाट राहत
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भाद्र १७, २०७६ समय: ८:००:३७
भुटाहा। सुनसरीकाे हरिनगर गाउँपालिका वडा नम्बर ६ घुस्कीमा हरिनगर गाउँपालिकाद्वारा ट्रान्सफर्मर जडान गरेको छ। गाउँपालिकाले आफ्नाे लगानीमा ट्रान्सफर्मर लगाएको हाे। बस्तीमा बिजुली पुग्दा स्थानीयबासीहरुमा खुशीयाली छाएको छ। बर्षौ देखि आफुहरु चर्को गर्मीकाे समस्या झेलिरहेको तर आफुहरुकाे समस्या कसैले समाधान गर्ने प्रयास नगरेको स्थानीयहरुकाे आराेप रहेको छ। पछिल्लो समय हरिनगर गाउँपालिकामा विकासको गतिले फड्को मार्दै अगाडी बढेको छ। हरिनगर गाउँपालिकामा अधिकांस गाउँ बस्तीमा बिजुली बत्ती नरहेको अवस्थामा गाउँपालिकाले आफ्नाे लगानीमा सबै क्षेत्रमा बिजुली बत्ती पुर्याउने उद्देश्य रहेको हरिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गफार अन्सारीले इनरुवा अनलाइन संग बताए।
अझ हेर्ने हो भने नेपाल–भारतसंग गासिएको सिमा बस्ती तथा सुनसरी खाेला नदीको पारीको बस्ती शिशुवा टोलमा बिद्युत सेवा बिस्तार भईसकेको छ। बाढी ग्रस्त क्षेत्र भनेर चिनीने नेपाल–भारतको सिमा संग जोडिएको बस्ती हरिनगर गाउँपालिका वडा नं. ५ शिशुवा बस्तीमा टुकी बल्ल निभेको छ। पहिलो पटक गाउघरमा बिजुली बत्ती बलेपछि त्यहाका स्थानीयले टुकी निभाएका हुन्। नेपाल–भारत सिमा बस्ती नजिक रहेको बसन्तपुरकाे शिशुवामा जिवनमा कल्पनै नगरेको काम हुदा त्यहाका स्थानीय यति बेला दङ्ग छन् । उनीहरुमा खुशियाली छाएको छ । हरिनगर गाउँपालिका कार्यालयको सहयोगमा बस्तीमा बिजुली बत्ती ल्याउन सफल भएपछि उनीहरुमा आशाका किरण जागेको छ। हरिनगर गाउँपालिका कार्यालयले बिजुली बत्ति पुर्याउन सफल भएपछि मनमा निकै खुशी छाएको अनुभूति भएको गाउँपालिका वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष ईसराइल अन्सारीले बताउछन्।
स्थानीय सरकारको पहलमा सडक, स्वास्थ्य चाौकी, बिजुली बत्ती आउदा बस्तीमै खुशी छाएको स्थानिय रितु पासवान बताउछन् । ‘यस पटकको चाड पर्व निकै उल्लासमय तरिकाले मनाउन पाउने भईयो। बिजुली बत्तीले बस्ती झिलिमिली हुने भयो, बालबालिकालाई पढाईमा निकै सुविधा हुने भयो, मोबाईल चार्ज गर्न पाईने भईयो, टेलिभिजन हेर्न पाइने भईयो’ स्थानिय जुवेर आलमले बताए। ‘अब बिद्युत मिटरको लागी फारम भर्न थालेका छौ’ स्थानिय पासवानले भने शिशुवा बस्तीमा करिब ५ हजार घरधुरी मध्य ६० प्रतिशत घर दलित रहेकोछ। उनिहरु मिटर जडान गरेपछि बिजुली बत्तीको उज्यालोमा बस्न पाउने भएका छन्। हरिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गफार अन्सारीले बसन्तपुरकाे शिशुवा तथा घुस्कीकाे बस्तीमा बिद्युत सेवा बिस्तार भएकोमा खुशी ब्यक्त गरेका छन्। बिद्युत सेवा संगै बस्तीलाई सुरक्षित बनाउन निमार्ण कार्यमा समेत लागिपरेका अध्यक्ष गफार अन्सारीले बताए । बिकासमा हामी गम्भिर छौं’ हरिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गफार अन्सारले भने ।